के तपाई एक Chiropractor सुझाव - जवाफ!
किराना स्टोर र सुपर केन्द्रहरू
घर सुधार स्टोरहरू
गोदाम क्लब स्टोर
घर / हाड वैद्य, हाड वैद्य, मालीश चिकित्सक मा एक Chiropractor, चिकित्सा उपचार, उत्तर अमेरिका, क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका / के तपाई Chiropractor टिप छ?
के तपाई Chiropractor टिप छ?
1 के तपाई क्यारोप्र्याक्टरको बारेमा सल्लाह दिनुहुन्छ?
1.1 परिचय: काइरोपेक्टर तथ्यहरू
1.2 Chiropractor Tipping शिष्टाचार: तपाईं एक chiropractor टिप?
1.3 के तपाई मालिश चिकित्सकलाई एक chiropractor मा टिप गर्नुहुन्छ?
1.4 तर म मेरो मसाजको लागि टिप दिन चाहन्छु: कइरोप्र्याक्टरमा मलिश थेरापिष्टलाई कत्तिको सल्लाह दिने?
के तपाई क्यारोप्र्याक्टरको बारेमा सल्लाह दिनुहुन्छ?
के तपाई पछाडि दुखाई, घाँटी दुखाइ, काँडा दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, तपाईको जोर्नीहरूमा दुखाई, वा टाउको दुखाइको लागि काइरोप्रेक्टर देख्दै हुनुहुन्छ? यदि यो तपाईको पहिलो चोटि क्यारोप्र्याक्टरमा जाँदै छ, तपाई आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो पहिलो भेटमा के आशा गर्नुपर्ला। तपाईं यो एक मालिश जस्तै लाग्न सक्छ र तपाईं आफ्नो chiropractor टिप गर्नुपर्छ कि आश्चर्यको लाग्न सक्छ। हुनसक्छ तपाई chiropractor को मसाज थेरापिस्टबाट पनि उपचार प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं सामान्य रूपमा मसाज थेरापिस्टहरूलाई टिप्स दिनुहुने हुनाले, के तपाईंले chiropractor को अफिसमा काम गर्ने मसाज थेरापिस्टलाई पनि टिप दिनुपर्दछ? यो लेखले तपाइँको सबै chiropractor र chiropractor मालिश थेरापिस्ट टिपिंग प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ।
परिचय: काइरोपेक्टर तथ्यहरू
Chiropractors मेडिकल पेशेवरहरु हुन् जसले एक चिकित्सा सेटिंग मा आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दछ। तपाईंलाई यो थाँहा छैन, तर लाइसेन्स प्राप्त काइरोपाक्टर्ससँग डक्टरेट डिग्री हुन्छ (हो, तिनीहरू डाक्टरहरू हुन्!) र बोर्ड-प्रमाणित र लाइसेन्स हुन आवश्यक छ उनीहरूले अभ्यास गर्ने अवस्थामा।
संयुक्त राज्यमा, त्यहाँ 70,000०,००० भन्दा बढी क्यारोप्रैक्टर्स छन् जसले year 35 करोड कृतज्ञ अमेरिकीहरू हरेक वर्ष क्यारोप्रैक्टरमा आफ्नो पीडा कम गर्ने सेवा पुर्‍याउँछन्। Chiropractors द्वारा प्रदान मेडिकल उपचार प्राय स्वास्थ्य हेरचाह बीमा द्वारा प्रतिपूर्ति गरिन्छ, त्यसैले कभरेज प्रमाणित गर्न आफ्नै योजनाको साथ जाँच गर्नुहोस्।
जेहिर chiropractors चिकित्सा पेशेवर हो, त्यहाँ अझै पनि केहि व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि हुन सक्छ उनीहरूले प्रदान गरेका सेवाहरू प्रभावकारी छैनन् र तिनीहरू 'वास्तविक डाक्टरहरू' होइनन्। यो गलत हो र लाखौं अमेरिकीहरूको पीडित राहतका लागि उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दछ। Ir 77% जो chiropractors द्वारा उपचार गरीरहेका थिए उनीहरुको chiropractic हेरचाह एकदमै प्रभावकारी थियो - कि उही मुद्दाहरु को लागी उपचार MD / DO चिकित्सक वा एक भौतिक चिकित्सक द्वारा प्रदान गरीएको भन्दा यो उच्च हो। उनीहरूले केहि ठीक गर्दै छन्!
Chiropractor Tipping शिष्टाचार: तपाईं एक chiropractor टिप?
होईन, तपाईलाई एक chiropractor टिप गर्न आवश्यक छैन र तिनीहरूले टिप अपेक्षा गर्दैन, कि त। यो किनभने chiropractors चिकित्सा पेशेवरहरु मानिन्छ। के तपाइँ तपाइँको डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहुन्छ जब तपाइँ उनीहरूलाई पछाडि दुखाइको लागि देख्नुहुन्छ? हैन, तपाईले गर्नुहुन्न र तपाईले आफ्नो chiropractor लाई पनि टिप गर्नुहुन्न। स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरुलाई टिपिंग गर्नु अमेरिकी टिपिंग संस्कृतिको हिस्सा होइन।
के तपाई मालिश चिकित्सकलाई एक chiropractor मा टिप गर्नुहुन्छ?
एक chiropractor को उपचार योजना को एक हिस्सा को रूप मा, तपाईं मालिश चिकित्सा कोर्स कोर्स निर्धारित हुन सक्छ। यी मसाजहरू प्रायः तपाईको क्यारोप्रैक्टरको कार्यालयको मसाज चिकित्सकद्वारा दिइन्छ। यो एउटा कठिन अवस्था हो किनकि तपाईं सामान्यतया स्पाको सेटिंगमा मसाज थेरापिस्टहरूलाई टिप्स दिनुहुन्थ्यो तर यहाँ तपाईं मेडिकल अफिसमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए, के तपाई chiropractor मा मालिस गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ? के तपाईले मालिश चिकित्सकलाई काइरोपेक्टरको अफिसमा टिप दिनु पर्छ?
होईन, तपाईलाई एक chiropractor को कार्यालय मा एक चिकित्सा मालिश को लागी सल्लाह छैन। त्यो भनियो, chiropractor मालिश चिकित्सक सामान्यतया सुझावहरु स्वीकार गर्छन् जुन सराहना गरिन्छ। केही काइरोप्रेक्टर अफिसहरूमा त्यहाँ मत्स्य चिकित्सकको उपचार कोठामा टिप जार वा टिप ईन्फाल्फेहरू हुन्छ जसमा तपाईले आफ्नो टिप छोड्छन। अन्य अफिसहरूमा तपाईंलाई सोध्न सोधिन्छ यदि तपाईं आफ्नो टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने। क्रेडिट कार्ड। यदि त्यहाँ टप जार वा टिप ईन्फाल्फ़हरू छैनन् भने, तपाईले टिप दिनु अघि अफिसको टिपिंग नीतिको लागि फ्रन्ट डेस्कमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने केहि chiropractic कार्यालयहरु मा, मालिश थेरापिष्टहरुलाई सुझावहरु लाई स्वीकार गर्न को लागी अनुमति छैन।
कारणले तपाईलाई मालिश चिकित्सकलाई एक काइरोपेक्टरमा टिप दिनुपर्दैन किनकि यो मेडिकल सेटिंगमा प्रदर्शन गरिएको छ। Chiropractic उपचार शारीरिक उपचार को एक रूप हो। तपाईले आफ्नो भौतिक चिकित्सकलाई सल्लाह दिनुहुन्न र तपाईको क्यारोप्रैक्टरको कार्यालयमा टिप्स पनि चाहिन हुँदैन, जसमा स्वास्थ्य बीमा प्रायः आच्छादित हुन्छ। टिपिंगका लागि तर्कहरू chiropractor कार्यालयहरूमा मसाज थेरापिस्टहरू प्रायः कर्मचारी हुँदैनन् तर chiropractor बाट कोठा भाँडामा लिन्छन्। यो हेयरड्रेसर वा स्पाको सेटअपसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ व्यक्तिले ठाउँ भाँडामा लिन्छ र मालिकलाई मासिक भाडा तिर्दछ। यदि तिनीहरूले काइरोपेक्टरबाट एउटा कोठा भाडामा लिइरहेका छैनन् भने तिनीहरू प्रायः कमिसनका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् यसको अर्थ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई मसाज दिए भने तिनीहरूले मसाज लागतको केही अंश प्राप्त गर्छन्। कमिसन मोडेल कपाल काट्नेमा पनि सामान्य छ, जहाँ हामीलाई टिप चाहिन्छ। अझै, किनकि मसाज मेडिकल अफिसमा थियो, तपाईंले चाहनुहुन्न भने टिप छोड्नुहुन्न।
तर म मेरो मसाजको लागि टिप दिन चाहन्छु: कइरोप्र्याक्टरमा मलिश थेरापिष्टलाई कत्तिको सल्लाह दिने?
यदि तपाईं टिप गर्न चाहानुहुन्छ भने, ch5देखि $ 10 राम्रो क्यारोप्रैक्टिक मसाजको लागि छोड्नुहोस्। तपाईं २० डलरसम्म टिप गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यो अपवादात्मक सेवाका लागि हुनेछ। टिपलाई मसाज थेरापिष्टको टिप जार वा टिप लिफाफामा छोड्नुहोस्, यदि दिइएको छ भने। अन्यथा, तपाईं तिनीहरूलाई टिप प्रत्यक्ष वा केही अफिसहरूमा दिन सक्नुहुनेछ, तपाईंसँग तपाईंको क्रेडिट कार्ड बिलमा टिप थप्ने विकल्प पनि छ।
हाड वैद्यChiropractor कार्यालयतपाइँ टिप गर्नुहोस्स्वास्थ्य हेरविचारबीमामालिशमालिश चिकित्सकचिकित्सा पेशेवरचिकित्सा उपचारटिपिङसुझाव हाड वैद्यहाड वैद्यमालीश चिकित्सक मा एक Chiropractorचिकित्सा उपचारउत्तर अमेरिकाक्षेत्रसंयुक्त राज्य अमेरिका
नाई टिप क्यालकुलेटर 1918
स्लोभाकियामा टिपिंग 1846
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1697
टिपिंग टूर गाईड्स श्रीलंका 1686
रोममा टिपिंग टूर गाईडहरू 1668